कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँले जनकपुर जानुपर्ने जहाज पोखरा «
कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँले जनकपुर जानुपर्ने जहाज पोखरा
नेपाली आकाशलाई युरोपेली संघ (ईयू)ले कालोसूचीमा राखेकै बेला आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरको गम्भीर त्रुटी र हेलचेक्र्याइँका कारण जनकपुर जानुपर्ने जहाज शुक्रबार पोखरामा अवतरण भएको छ । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट जनकपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको एटीआर–७२ विमान पोखरा पुगेको हो । तीन बालबालिकासहित ६९ यात्रु काठमाडौंबाट जनकपुरका उडे पनि वुद्ध एयरको चालकदलले पोखरा पु-यायो । बोर्डिङ पास लिएर सुरक्षा जाँच गरी अघि बढेका यात्रुहरुलाई जनकपुर जाने भन्दै पोखराको विमान चढाइयो ।
वुद्ध एयरले भने बिमानस्थलमा कार्यरत ग्राउण्ड ह्यान्डिलिङ गर्ने कर्मचारीबीच भएको गलत सञ्चार प्रवाहका कारण यस्तो घटना भएको बताएको छ । उनीहरुलाई पोखरा जान तयार रहेको ६०७ उडान नम्बरको विमानमा चढाइएको थियो । पोखरामा अवतरणपछि भने २० मिनेट जहाजभित्रै राखेर विमान जनकपुर पठाइएको थियो ।
बुद्ध एयरका मार्केटिङ सेल्स एन्ड ग्राउण्ड ह्यान्डिङ निर्देशक रुपेश जोशीका अनुसार कर्मचारीहरुमा सही सूचना प्रवाह नहुँदा यस्तो समस्या भएको हो । “हालसम्मको वस्तुस्थिति बुझ्दा चालकदलमा कम्यूनिकेसन ग्याप देखिँदा यस्तो हुन गएको देखिन्छ,” जोशीले भने, “के कारणले र कसरी यस्तो हुन गयो भनेर हामी आन्तरिक छानबिनपछि पत्ता लगाउने छौं ।”
विमान दिउँसो २ बजेर १५ मिनेटका लागि काठमाडौं विमानस्थलबाट जनकपुरका लागि डिपार्चर टाइम तोकिएको थियो । वुद्ध एयरका कर्मचारीहरुको लापरवाही यतिसम्म थियो कि ६०७ उडान नम्बर भएको पोखरा जाने विमानमा रहेका जनकपुर गन्तव्य भएका यात्रुहरुलाई टेकअफ हुनुअघि विमान परिचारिकाले समेत जनकपुरकै लागि उडान भरेको जानकारी गराएकी थिइन् । यतिसम्म कि पोखराको आकाशबाट फेवाताल देखिँदा समेत परिचारिकाले जनकपुरको तापक्रम र जनकपुरमा अवतरण गर्न लागेको जानकारी गराउँदा यात्रुहरु नै अचम्ममा परेका थिए ।
पोखरा पुगेपछि विमानभित्रै यात्रुहरुले हल्ला गरेपछि उनीहरुलाई विमान डाइभर्ट गरिएको र इन्धनका लागि मात्रै पोखरा आएको भन्दै क्याविन क्रुले गलत जानकारी दिएका थिए । “हामीलाई जनकपुरका लागि उडान भरेको भनेर माइकिङ गरिएको थियो, फेवाताल देखिँदा पनि विमान परिचारीकाले जनकपुर नै अवतरण गर्न लागेको भनेपछि हामी अचम्ममा प-यौं,” विमानमा सवार यात्रु पंकज महतले भने, “जनकपुरको लागि उडान भरेको विमान कसरी पोखरा ल्यान्ड गर्न लाग्यो हामी अचम्ममा प¥यौं । विमान बेलुका ५ बजेर १० मिनेटमा मात्र जनकपुर अवतरण ग-यो ।”
पोखरा विमानस्थल कार्यालयले भने वुद्ध एयरको असावधानीको कारणले जनकपुर जाने विमान पोखरा आइपुगेको जनाएको छ । “यात्रुहरु ५०५ उडान नम्बर भएको विमानबाट जनकपुर जानुपर्ने थियो । तर बुद्ध एयरका कर्मचारीको असावधानिका कारण यात्रुहरुलाई पोखराका लागि तयार विमानमा चढाएर पोखरा ल्याइएको रहेछ,” पोखरा विमानस्थलका प्रमुख भोला गुरागाइले कारोबारसँग भने ।
विमानको चालकदलमा पाइलट रिता प्याकुरेल र को–पाइलट एस के कटुवाल थिए । पोखरा विमानस्थलका प्रमुख भोला गुरागाईंका अनुसार ६०७ नम्बरको विमान पोखरा नै आउनुपर्ने हो, सोही अनुसार अनुमति पनि दिइएको हो । तर यात्रुहरु फरक गन्तव्यमा आएपछि चार्टर फ्लाइट अनुमति जारी गरेर ५०५ उडान नम्बरबाटै पोखराबाट इन्धन भरेर काठमाडौंको हवाई मार्ग हुँदै जनकपुर पठाइएको थियो । काठमाडौं विमानस्थलमा खटिने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कर्मचारीको लापरबाहीका कारण यस्तो भएको हुनसक्ने गुरागाइँको भनाइ छ ।
एटीआर–७२ विमान उडान नम्बर ५०५ बाट २ बजेर १५ मिनेटको डिपार्चर समय थियो । त्यसपछि विमानले जनकपुरका लागि उडान भरे पनि ३ बजेर ४० मा पोखरामा अवतरण गरेको थियो । सो विमान ४ बजेर ३ मिनेटमा पोखराबाट काठमाडौं हवाईमार्ग हुँदै बेलुका ५ बजेर १० मिनेटमा जनकपुर अवतरण गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
सामान्य समयमा २२ देखि २५ मिनेटमा काठमाडौंबाट जनकपुर अवतरण हुने गर्छ । बुद्ध एयरले यसअघि विराटनगरमा अवतरण गर्नुपर्ने विमान भैरहवा अवतरण गरेको थियो । यात्रुलाई बोर्डिङ गरेपछि उडानको समयमा कुन बसमा लाने र कुन विमानमा लाने भनेर पूर्व निर्धारित कार्ययोजना तयार पारिन्छ ।
कहाँ भयो गडबडी?
नियमअनुसार विमान चालकले कहाँ उडान भर्ने ? कति यात्रु छन् ? विमानमा लोड कति छ ? भनेर हस्ताक्षरसहित उडान भर्नुपर्छ । सो उडान तालिका पाइलटले क्याबिन क्रु (एयरहोस्टेस)लाई जानकारी गराउँछन् र भूमि व्यवस्थामा खटिएका कर्मचारीले पनि क्याबिन क्रुलाई जनकारी गराउनु पर्छ । साथै क्याबिन क्रुले उडानबारे माइकिङ गर्दा पाइलटको क्याविनसम्म नै जानकारी प्राप्त हुन्छ । अवतरण गर्दा क्याबिन क्रुले पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको समन्वयमा अवतरणको वस्तुस्थिति जानकारी गराउँछन् ।
सोहीअनुसार विमानचालकलाई पोखराको प्लान दिइएसँगै भूमि व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीले क्याबिन क्रुलाई जनकपुर जाने यात्रुको विवरण बुझाए । तर, यहाँ एटीसी, भूमि व्यवस्थापन, क्याबिन क्रु, पाइलट दलका सदस्य र बुद्ध एयरका कर्मचारीबीच फितलो समन्वयको अभाव र कमजोर व्यवस्थापन देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले हालसम्म आफैले प्रारम्भिक जानकारी मात्रै लिएको र आइतबार बुद्ध एयरले नै अध्ययन गरी स्पष्टीकरण दिने जानकारी दिए ।